Korsashada IOS 9 waxay kordheysaa boqolkiiba 88 | Wararka IPhone
Alexander Cabrera | | macruufka 9, Noticias
88 boqolkiiba qalabka iPhone, iPad iyo iPod Touch ayaa hadda isticmaalaya iOS 9, oo ah hal-dhibic oo ka badan 9 boqolkiiba heerka iOS 87 ee korsashada ee la diiwaan geliyey saddex toddobaad ka hor.
Isla muddadaas, IOS 8 waxay ka tagtay boqolkiiba 10 aaladaha diiwaangashan Ogosto 15, ilaa 9 boqolkiiba qalabka. Noocyada duugga ah ayaa wali ku jira boqolkiiba 3 qalabka ugu da'da weyn halkaas, kuwani waa tirakoobyada ugu cusub ee ay soo bandhigtay App Store ee loogu talagalay horumarinta.
Tirakoobyadan korsashada waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo Apple ay tirineyso qalab kasta oo gala marinka App Store Ogosto 29, 2016, Apple waxay caadi ahaan cusbooneysiisaa lambarradan labadii toddobaadba mar. si ay u sii daayaan xoogaa cusbooneysiin ah ka hor inta aan si rasmi ah loo sii deynin macruufka 10 ee isticmaalka dadweynaha.
Google wali ma aysan sii deynin tirooyinka korsashada ee AndroidLaakiin waxaan arki karnaa in nooca ugu dambeeya ee Android hadda uu leeyahay wax ka yar 0,1 boqolkiiba qaybinta, taas oo macnaheedu yahay inaan lagu dari doonin tirakoobka cusub markii la helo.
Iyada oo ku saleysan xogta marin-u-helka Dukaanka Play Store oo la qabtay muddo toddobo maalmood ah oo ku eg Ogosto 1, ku dhowaad sannad jir, Android 6.0 Marshmallow waxaa laga helaa boqolkiiba 15,2 taleefannada Taleefannada casriga ah ee casriga ah iyo kiniiniyada 'Android'. Sida loo yaqaan 'Lollipop' oo laba sano jir ah (5,0 ilaa 5,1), waxay ku dhacdaa wax ka badan seddex meelood meel ka mid ah terminaalka Android, ama 35,3 boqolkiiba qalabka.
Si ka duwan Apple, oo xukunta dhammaan khibrada isticmaale oo awood u leh inay ku riixdo cusbooneysiinta barnaamijka iOS ee saldhigeeda isku mar, Cusboonaysiinta barnaamijyada Android waxay ku lug leedahay dhinacyo badan waxayna u baahan tahay caddeyn ka timaada chipmakers iyo hawl wadeenada.
Sababtaas awgeed, qaar badan, haddii aysan ahayn dhammaan iibiyeyaasha qalabka Android runti iskama dhibto inay waqti iyo lacag geliyaan sidii ay u gaarsiin lahaayeen cusbooneysiinta barnaamijyada qalabka horay loo iibiyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 9 » Korsashada IOS 9 waxay kordheysaa boqolkiiba 88
Korsashada macruufka ee ... Apple waxay ku qasbeysaa qof walba inuu cusbooneysiiyo nooca macruufka wixii ugu dambeeyay iyadoon suurtagal ahayn in dib loo noqdo iyo iyadoo aan la daryeeleyn ugu yaraan rayiga dadka isticmaala.
Waxaan ku xujeynayaa Apple inay u ogolaato inay ku noqoto macruufka 6.x waxaanan arki doonaa in 88% ka mid ah ios 9 ay ku soo laabanayaan quudhsashada macruufka 6.x!
Daal fariinta farxada leh ee ii sheegaysa inuu jiro nooc cusub oo macruuf ah!
Anigu waxaan ahay adeegsade, waxaan ahay mulkiilaha saxda ah ee aaladda iyo waxyaabaha waajibku igu raaci maayaan.
Apple waxay sameyneysaa qalad la mid ah kan Microsoft iyo cusbooneysiintiisa oo lagu qasbay Windows 10.
Mudane Soo-saareyaasha: 99% dadka iibsada qalabka Annagu ma nihin saynisyahanno kombiyuutar, waxaan ka dheregsan nahay waxyaabo badan oo aan macno lahayn afar darajo oo aan xirfad lahayn darteed. Naga tag, aan ku raaxeysano wixii aan soo iibsannay annaga oo aan u baahnayn inaan dagaal la galno maalin haddii, sidoo kale maalin kasta oo lala socdo casriyeynno macno darro ah oo ay sameeyaan oo dhan ay ka dhigayaan inay ka dhigaan hadal haynta badan ee "khibrada" isticmaalka aaladaha.
Waxaan ula jeeday inaan dhaho: Ka careysiiso "khibrada" isticmaalka ...
Khalad kale oo kumbuyuutar caadi ah, mahad macruufka 9 ee igu kalifay khibrada isticmaale, wax aan igu dhicin aniga oo leh ios 6 ...
Sago Mini Disguise Ilmaha, waa lacag la'aan wakhti xaddidan